သူ့ရဲ့စိတ်ကူး အိမ်မက်လေးကို ပရိသတ် တွေဆီ ပြန်လည် မျှဝေလာတဲ့ နိုင်းဝမ်း – Cele Posts
လူငယ်ပရိသတ် တွေရဲ့တစ်ခဲနက်အားပေးခြင်းရရှိထားတဲ့ အဆိုတော် နိုင်းဝမ်းကတော့ မကြာခင် အချိန်တွင်းမှာ ချစ်ရသူလေးနဲ့ ဘဝခရီးလမ်းကို အတူလျှောက် လှမ်းတော့မှာဖြစ်သလို နေ့စဉ်နီးပါးလည်း ပရိသတ်တွေ အားကျရလောက်အောင် ချစ်သူလေးနဲ့ ပျော်စရာအကြောင်းအရာလေးတွေကို မျှဝေပေးနေသူပါ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ သူ့ရဲ့ဘဝမှာ အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒလေး တစ်ခုကို ပရိသတ်ကြီးပါ စိတ်ကူးယဉ် ချင်စရာကောင်း လောက်အောင် ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ အိပ်မက် ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်.. ကျွန်တော့ရဲ့အိပ်မက် ကတော့ ဒါအကြီးဆုံးပဲ..ဘဝမှာအလိုချင်ဆုံး ဆုတောင်းပါဆိုရင် ဒီဆုပဲ ကျွန်တော်တောင်းမယ်.. မြန်မာပြည်ကိုချစ်လို့ မြန်မာပြည်မှာပဲ သေတဲ့အထိနေမယ်..အဲ့ဒါထက် မိဘတွေကိုထားခဲ့ပြီး ဘယ်နိုင်ငံမှ မသွားချင်ဘူးဗျာ.. ဒါကြောင့် မြန်မာတစ်ပြည်လုံးနဲ့ အခြားနိုင်ငံတော်တော် များများရောက်ဖူးပြီး ဒေသတိုင်းရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ လူနေမှုဘဝတွေ တွေ့မြင်ခဲ့ပေမယ့်…. အသက်အရွယ် တစ်ခုရလာရင် အနုပညာ အလုပ်တွေရပ်ပြီး မိသားစုနဲ့အတူ မြိတ်မြို့လေးမှာ အခြေသွားချဖို့စဉ်းစားထားတယ်.. ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အရပ်ဒေသဆိုတာ လောကီဘုံမှာ မရှိပေမဲ့ တောင်တန်း တွေအောက်က ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသလေးမှာ နေရတာကိုကြိုက်တယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့ အရပ်လည်း ဖြစ်သလို ဘာသာခြား တွေနဲ့လည်း သင့်မြတ်စည်းလုံးကြ တာကိုမြင်ခဲ့တယ်
စီးပွားရေးလည်း ထွန်းကား ကြတယ်၊ မြိတ်မှာ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ တွေလည်း ရှိတယ်၊ သမာအာဇီဝကျတဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလေး တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်၊ ကိုယ့်စိတ်ကူး ထဲရှိသမျှအတိုင်း စီမံခန့်ခွဲမယ်..မြိတ်ဒေသကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်ပြီး ဖူးခက်ထက်သာအောင် လုပ်ကြည့်ချင်တယ်၊ စိတ်တူကိုယ်တူဝါသနာ တူတဲ့ဝန်ထမ်းတွေခန့်ပြီး သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေကိုပါ စောင့်ရှောက် ထားချင်တယ်၊ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေကို လွမ်းတဲ့အခါ ကိုယ့်ဒေသကို အလည်ခေါ်ရင်းပြန်ဆုံ ချင်တယ်.. ပိုက်ဆံအဆင်ပြေ လာရင် ကျွန်းလေး တစ်ကျွန်းဝယ်ပြီးresort လေးတစ်ခုဆောက် ချင်တယ်၊ မိဘတွေအတွက်လည်း စိတ်ချရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပြီဆိုရင်၊ စားဝတ်နေရေးပြေလည်ပြီး ကိုယ့်ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ ဒီအရာလေးတွေလုပ်ရင်း မိန်းမနဲ့အတူ အိုမင်းသွားချင်တယ် ဆိုပြီး သူ့ဘဝရဲ့အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒလေးကို မျှဝေလာပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကတော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အပြည့်နဲ့ နိုင်းဝမ်းရဲ့စိတ်ကူးလေး ကို အားကျခဲ့ရသလို တနေ့ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်အတိုင်း အကောင်အထည် ဖော်သွားနိုင်ဖို့လည်း ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြ ပါတယ်.. ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်အတိုင်း တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် အကောင်အထည် ဖော်ရင်း ဆန္ဒနဲ့ဘဝထပ်တူကျပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သူ့ရဲ့စိတျကူး အိမျမကျလေးကို ပရိသတျ တှဆေီ ပွနျလညျ မြှဝလောတဲ့ နိုငျးဝမျး
လူငယျပရိသတျ တှရေဲ့တဈခဲနကျအားပေးခွငျးရရှိထားတဲ့ အဆိုတျော နိုငျးဝမျးကတော့ မကွာခငျ အခြိနျတှငျးမှာ ခဈြရသူလေးနဲ့ ဘဝခရီးလမျးကို အတူလြှောကျ လှမျးတော့မှာဖွဈသလို နစေ့ဉျနီးပါးလညျး ပရိသတျတှေ အားကရြလောကျအောငျ ခဈြသူလေးနဲ့ ပြျောစရာအကွောငျးအရာလေးတှကေို မြှဝပေေးနသေူပါ။ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ သူ့ရဲ့ဘဝမှာ အဖွဈခငျြဆုံး ဆန်ဒလေး တဈခုကို ပရိသတျကွီးပါ စိတျကူးယဉျ ခငျြစရာကောငျး လောကျအောငျ ရေးသားမြှဝခေဲ့ပါတယျ။
လူတိုငျးမှာ အိပျမကျ ကိုယျစီရှိကွပါတယျ.. ကြှနျတော့ရဲ့အိပျမကျ ကတော့ ဒါအကွီးဆုံးပဲ..ဘဝမှာအလိုခငျြဆုံး ဆုတောငျးပါဆိုရငျ ဒီဆုပဲ ကြှနျတျောတောငျးမယျ.. မွနျမာပွညျကိုခဈြလို့ မွနျမာပွညျမှာပဲ သတေဲ့အထိနမေယျ..အဲ့ဒါထကျ မိဘတှကေိုထားခဲ့ပွီး ဘယျနိုငျငံမှ မသှားခငျြဘူးဗြာ.. ဒါကွောငျ့ မွနျမာတဈပွညျလုံးနဲ့ အခွားနိုငျငံတျောတျော မြားမြားရောကျဖူးပွီး ဒသေတိုငျးရဲ့ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးနဲ့ လူနမှေုဘဝတှေ တှမွေ့ငျခဲ့ပမေယျ့…. အသကျအရှယျ တဈခုရလာရငျ အနုပညာ အလုပျတှရေပျပွီး မိသားစုနဲ့အတူ မွိတျမွို့လေးမှာ အခွသှေားခဖြို့စဉျးစားထားတယျ.. ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ အရပျဒသေဆိုတာ လောကီဘုံမှာ မရှိပမေဲ့ တောငျတနျး တှအေောကျက ပငျလယျကမျးခွဒေသေလေးမှာ နရေတာကိုကွိုကျတယျ၊ ဗုဒ်ဓဘာသာထှနျးကားတဲ့ အရပျလညျး ဖွဈသလို ဘာသာခွား တှနေဲ့လညျး သငျ့မွတျစညျးလုံးကွ တာကိုမွငျခဲ့တယျ
စီးပှားရေးလညျး ထှနျးကား ကွတယျ၊ မွိတျမှာ သူငယျခငျြးမိတျဆှေ တှလေညျး ရှိတယျ၊ သမာအာဇီဝကတြဲ့ ခရီးသှားလုပျငနျးလေး တဈခုလုပျခငျြတယျ၊ ကိုယျ့စိတျကူး ထဲရှိသမြှအတိုငျး စီမံခနျ့ခှဲမယျ..မွိတျဒသေကို သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးမှုတှလေုပျပွီး ဖူးခကျထကျသာအောငျ လုပျကွညျ့ခငျြတယျ၊ စိတျတူကိုယျတူဝါသနာ တူတဲ့ဝနျထမျးတှခေနျ့ပွီး သူတို့နဲ့ပတျသကျတဲ့ မိသားစုဝငျတှကေိုပါ စောငျ့ရှောကျ ထားခငျြတယျ၊ သူငယျခငျြး အပေါငျးအသငျးတှကေို လှမျးတဲ့အခါ ကိုယျ့ဒသေကို အလညျချေါရငျးပွနျဆုံ ခငျြတယျ.. ပိုကျဆံအဆငျပွေ လာရငျ ကြှနျးလေး တဈကြှနျးဝယျပွီးresort လေးတဈခုဆောကျ ခငျြတယျ၊ မိဘတှအေတှကျလညျး စိတျခရြတဲ့ အခွအေနဖွေဈပွီဆိုရငျ၊ စားဝတျနရေေးပွလေညျပွီး ကိုယျ့ဆန်ဒဖွဈတဲ့ ဒီအရာလေးတှလေုပျရငျး မိနျးမနဲ့အတူ အိုမငျးသှားခငျြတယျ ဆိုပွီး သူ့ဘဝရဲ့အဖွဈခငျြဆုံး ဆန်ဒလေးကို မြှဝလောပါတယျ။
ပရိသတျတှကေတော့ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ရညျရှယျခကျြအပွညျ့နဲ့ နိုငျးဝမျးရဲ့စိတျကူးလေး ကို အားကခြဲ့ရသလို တနကေို့ယျဖွဈခငျြတဲ့ ရညျမှနျးခကျြအတိုငျး အကောငျအထညျ ဖျောသှားနိုငျဖို့လညျး ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွ ပါတယျ.. ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ ရညျမှနျးခကျြအတိုငျး တဈဆငျ့ပွီးတဈဆငျ့ အကောငျအထညျ ဖျောရငျး ဆန်ဒနဲ့ဘဝထပျတူကပြါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူThe Voice Myanmar Season (3) ပြိုင်ပွဲဝင် ကိုလင်းမြိုင်ရဲ့ သီဆိုမှုအပေါ် မျက်ရည်တောင်ကျခဲ့ ရတယ်ဆိုတဲ့ နေနေ